Linux 5.6 biara na WireGuard, USB 4.0, Arm EOPD na ndi ozo | Site na Linux
Linux 5.6 biara na WireGuard, USB 4.0, Arm EOPD na ndi ozo
Linus Torvalds kwupụtara na Sọnde a ụdị mbipụta 5.6 nke kernel Linux nwere mgbe CRs bipụtara ọtụtụ. Linux 5.6 nwere ọtụtụ mgbanwe na ndozi. Dị ka ụdị ọhụụ ọ bụla nke usoro mmepe isi, nke kachasị ọhụrụ na-eweta ihe karịrị puku iri mgbanwe, ụfọdụ na-emelite ọrụ ọhụụ, ndị ọzọ na-emezi ndị dị ugbu a.
Akụkụ bụ isi nke nsụgharị a gụnyere nkwado Arm EOPD, oge aha, BPF ezipu na ogbe BPF kaadị arụmọrụ na openat2 usoro oku, mmejuputa nke VPN WireGuard wdg.
1 Ndakọrịta USB 4
2 Ndozi ahụhụ maka afọ 2038
3 Nkwado WireGuard
4 ARM EOPD nkwado
Ndakọrịta USB 4
USBkpụrụ USB 4 bụ otu n'ime atụmatụ ndị bụ isi nke a version nke Linux Kernel kemgbe Emebere nkwado USB4 nke dabere na nkọwapụta Thunderbolt 3. Na tiori, ọsọ nwere ike iru 40 Gb / s site na USB-C njikọ, na mgbakwunye na kwado ike ruo 100 watts site na ọdụ ụgbọ mmiri PD (Nyefe Ike). USB4 na-enye gị ohere ijikọ ihe ngosi 4K ma ọ bụ 8K na USB, yana jikọọ usoro nke ọtụtụ ngwaọrụ USB na agbụ na otu ọdụ ụgbọ mmiri.
Njikọ njikọ a, nke emechara n'oge ọkọchị gara aga wee pụta site na Thunderbolt 3, kwesịrị ịpụtaworị na sistemụ n'ime ọnwa ole na ole. Intel Tiger Lake processors process, nke ketara desktọọpụ desktọọpụ na usoro ihe ntanetị, ga-akwado.
Ndozi ahụhụ maka afọ 2038
Mgbanwe ọzọ na-abịa na Linux 5.6 bụ njehie nke afọ 2038 nke metụtara 32-bit architectures n'ihi nsogbu nsogbu nsogbu.
N'ezie, Unix na Linux na-echekwa oge bara uru n'ụdị ntinye ọnụ nke 32-bit nwere ikike kacha elu nke 2147483647. E wezụga nọmba a, n'ihi ọnụ ọgụgụ zuru ezu, ụkpụrụ ga-echekwa dị ka ọnụọgụ adịghị mma Nke a pụtara na maka sistemụ 32-bit, ọnụọgụ oge enweghị ike ịfe 2147483647 sekọnd ka Jenụwarị 1, 1970.
Na okwu ndị dị mfe, mgbe 03:14:07 UTC dị na Jenụwarị 19, 2038, n'ihi otu integer na-erubiga ókè, oge a ga - abụ Disemba 13, 1901 kama ka ọnwa Jenụwarị 19, 2038.
Linux 5.6 biara na teknụzụ Wireguard VPN, ọ nọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere onwe ya nwa oge. Nke a bụ n'ihi, ihe ndị ọzọ, ka a njikọ njikọ ọsọ ọsọ, arụmọrụ dị mma ma sie ike, njikwa ngwa ngwa na nghọta njikọ na-akwụsị. Na mgbakwunye, teknụzụ ọwara ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mfe ịhazi karịa teknụzụ VPN ochie; Wireguard na-enye nchebe megide eavesdropping na algorithms kachasị ọhụrụ.
WireGuard na-eji Curve25519 eme ihe maka igodo mgbanwe, ChaCha20 maka izo ya ezo, Poly1305 maka nyocha data, SipHash maka igodo hashtable, na BLAKE2s maka hash. Ọ na-akwado Layer 3 maka IPv4 na IPv6 ma nwee ike encapsulate v4-in-v6 and vice versa. Ndị na-enye ọrụ VPN nabatara WireGuard dịka Mullvad VPN, AzireVPN, IVPN, na cryptostorm, ogologo oge tupu etinye ya na Linux, n'ihi atụmatụ ya "magburu onwe ya".
ARM EOPD nkwado
N'ihi Meltdown vulnerability nke na-enye onye na-awakpo ya ohere ohere iji gụọ data site na kernel space site na iji nchikota nke igbu egbu na ọdụ ụmụaka. Nchekwa kernel megide Meltdown bụ iche nke tebụl peeji nke kernel, na-ewepụ tebụl peeji kernel kpamkpam site na eserese oghere ndị ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ mana nwere ezigbo arụmọrụ arụmọrụ ma ọ nwere ike igbochi iji ọrụ nhazi ndị ọzọ.
Agbanyeghị, a nabatara ebe niile na ịnọrọ ohere ga-adịwanye mkpa iji kpuchido sistemụ oge ụfọdụ.
Enwere uzo ozo, nke bu uzo dabere na E0PD, nke agbakwunyere dị ka akụkụ nke ogwe aka v8.5. E0PD na-ahụ maka nnweta site na ohere onye ọrụ ruo na etiti nke kaadị ebe nchekwa A na-eme kernel mgbe niile n'oge niile, si otú a na-ezere ọgụ mmekọrịta.
Ya mere, E0PD egbochighị ya ịgba ọsọ na ebe nchekwa nke oghere onye ọrụ agaghị enwe ike ịnweta, ma ọ na-egbochi ọwa n'akụkụ nke a na-ejikarị wepụ data ahụ kpughere site na arụmọrụ ọjọọ.
Finalmente ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọ njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Linux 5.6 biara na WireGuard, USB 4.0, Arm EOPD na ndi ozo
Machị 2020: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke sọftụwia efu
WordPress 5.4: Nnukwu Mbido mbụ nke 2020